लकडाउनको तेस्रो दिन ः गोरखामा दिनभर यात्रु बोकेर हुँईकिरहे एम्बुलेन्स | Daraundi Gorkha's No. 1 Newspaper Daraundi Gorkha's No. 1 Newspaper
लकडाउनको तेस्रो दिन ः गोरखामा दिनभर यात्रु बोकेर हुँईकिरहे एम्बुलेन्स
Published On : १३ चैत्र २०७६, बिहीबार २१:३३
सडकमा एम्बुलेन्स हुँईकिएको देख्दा लाग्छ धेरै मानिस बिरामी या दुर्घटनामा परेर अस्पताल जाँदैछन् । तर गोरखामा रहेका अस्पतालको तथ्याङ्क हेर्दा बिरामी बनेर एम्बुलेन्समा सवार गरेकाहरु उपचार गराउन अस्पताल पुगेका छैनन् । एम्बुलेन्सले ‘लकडाउन’ मा सवारी साधन नचलेको मौका छोपेर लकडाउनको तेस्रो दिन बिहिवार यात्रु ओसार पोसार गरिरहेका पुष्टी भएको छ ।
लकडाउनको तेस्रो दिन बिहिवार गोरखा अस्पतालमा तीन जना बिरामी एम्बुलेन्सबाट उपचार सेवा लिन पुगेका अस्पतालका सुचना अधिकारी कृष्ण ढकालले बताए । ‘यहाँबाट डिस्चार्ज भएको छैन’ उनले भने ‘आएका बिरामी पनि गम्भिर अवस्थाका थिएनन् ।’ सदरमुकामको आमा बा हस्पिटल र बरदान हस्पिलटमा एम्बुलेन्सबाट सेवा लिन बिरामी पुगेनन । एपोलो अस्पतालमा एक जना बिरामी एम्बुलेन्समा उपचार गराउन पुगेका डाक्टर सन्तोष मास्केले बताए । यी बाहेकका सरकारी र निजी ठुला अस्पताल गोरखामा छैनन् । अस्पतालहरुको तथ्याङ्क हेर्दा चारवटा एम्बुलेन्स मात्रै बिरामी बोक्न प्रयोग भएको देखिन्छ, त्यो पनि एक पटक ओहोर दोहोरका लागि । तर गोरखाको सडकमा खचाखच यात्रु लिएर छिनछिनमा एम्बुलेन्स हुँईकिएको थियो ।
गोरखाको मात्र होईन अन्यत्रबाट आएका एम्बुलेन्सले पनि यात्रु लिएका आएका थिए । एम्बुलेन्समा बिरामीको बाहना बनाउँदै धेरै यात्रु सवार थिए । ‘बिरामी बोकेको होला भनेर हामीले एम्बुलेन्सलाई चेकजाँच गरेनौँ’ जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका प्रमुख सुकबहादुर बिकले भने । सदरमुकाम भएर ग्रामिण भेगमा यात्रु बोकेका एम्बुलेन्स पुगेका थिए । गोरखा–आरुघाट सडक, गोरखा–बालुवा सडक खण्डमा अन्यत्र भन्दा धेरै एम्बुलेन्स ओहोर दोहोर गरेका थिए । ‘एम्बुलेन्समा मानिस ओहोर दोहोर गरेको गुनासो आएको छ’ गोरखाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुरेन्द्र पौडेलले भने ‘हामी शुक्रवारदेखि चेकजाँच गर्ने योजनामा छौँ ।’ बन्दको मौका छोपेर घर शहरबाट गाउँ फर्कनेहरु सँग लाग्ने भन्दा धेरै भाडामा नक्कली बिरामी लिएर एम्बुलेन्स चलेका छन् ।